Rashida Dayib Oo Taageero Weyn Heshay Iyo Ilhaan Cumar Oo Cidlo Taagan - Jigjiga Online
HomeSomalidaRashida Dayib Oo Taageero Weyn Heshay Iyo Ilhaan Cumar Oo Cidlo Taagan
Rashida Dayib Oo Taageero Weyn Heshay Iyo Ilhaan Cumar Oo Cidlo Taagan
Falastiiniyiinta iyo jiilalka asal ahaan kasoo jeeda dhulkaasi ayaa saacadihii u dambeeya barta Twitter ku faafinayay sawirrada ayeeyooyinkood, kuwaasoo ay bogaadiyeen awoodda iyo dhiiragelinta ay ka heleen.
Arintan ayaa kusoo beegantay xilli gabadha Congress-ka Maraykanka ka tirsan ee Rashida Tlaib ay joojisay booqasho ay ugu tegi lahayd ayeydeed oo ku nool deegaanka la haysto ee Daanta Galbeed.
Twitter-ka ayaa waxaa qabsaday sawirro haween da’ ah oo Falastiiniyiin ah, iyadoo la adeegsanayo astaanta MyPalestinianSitty – oo loo jeedo ayeydey.
Dadka sawirradda soo dhigaya ayaa ka warramay sida ayeeyooyinkooda ay dowr muhiim ah uga qaateen noolashooda, gaar ahaan dhiiragelinta, ad-adeyga iyo xirfadaha cunno karinta.
Arintan ayaa jawaab u ah muranka ka dhashay booqashada ay rabtay xildhibaan Rashida Tlaib inay ugu tagto ayeydeed oo ku nool Daanta Galbeed.
Booqasho rasmi ah oo ay ugu tegi rabtay ayaa waxaa markii hore u diidday dowladda Israel oo ku haysata taageeradda ay Rashida u fidiso dhaq-dhaqaaqa u ololeeya in la qaadaco badeecada Israel.
Ka dib ayaa waxa ay codsatay inay si shakhsi ah ku booqato, waana loo ogolaaday iyadoo la eegayo xeerka bani’aadannimada, balse Rashida ayaa iskeed u joojisay booqashadaasi.
Muxuu salka ku hayaa go’doonka Israa’iil ay Ilhaan Cumar iyo Rashida Dayib uga mamnuucaday inay tagaan Daanta Galbeed?
Horaantii Sannadkan, waxay barteeda Twitter-ka soo dhigtay qoraal ay ku eedeyneyso dadka Israel u ol’oleeya. Warbaahinta Israel ayaa sidoo kale aad u weerartay Ilhaan.